China Profile Door Lock Setha For Interior Doors Manufacture and Factory |YALIS
Ukuqedwa Okujwayelekile: i-matt emnyama & emnyama, i-matt emnyama & emhlophe
Faka isikhiya sesibambo somnyango omncane we-YALIS ezicabheni ezingabonakali, iminyango yophahla oluphezulu, ukuze ukhulise ngokugcwele izinzuzo zomnyango ngokwawo, unqamule amaketango avamile, futhi ugqamise umqondo ongapheli wedizayini wedizayini yendlu iyonke endaweni elinganiselwe.
Umkhiqizo Owenziwe Ngezifiso
Isibambo somnyango senziwe nge-aluminium alloy, engenza isiphetho esifanayo njengohlaka lomnyango we-aluminium ukukhulisa umphumela wokubuka wekhaya.Ukufakwa kwesibambo somnyango we-minimalist kungenziwa ngezinto ezifanayo njengobuso bomnyango, okwenza kube inhlanganisela ephelele nomnyango.
Isakhiwo Sokuvula Esinodlame
I-MULTIPLICITY inelungelo lobunikazi lokuvula okulwa nodlame.I-engeli yokuvula ingu-23°, engavimbela ngempumelelo isibambo ukuthi singalengi futhi ivikele ukuphepha komndeni.
I-Magnetic Latch Lock
Ukuhlolwa komjikelezo wokukhiya kwe-latch kazibuthe sekufinyelele izikhathi ezingaphezu kuka-200,000 okuqinisekisa ukusetshenziswa kwesikhathi eside.Futhi ikesi lesiteleka elilungisekayo lenza ukufaka kube lula.I-zinc alloy latch yayo enomkhono wenayiloni ngaphandle, ingenza ukuvuleka nokuvala kahle futhi inciphise ukuphazamiseka komsindo.
U-YALIS ubheka imikhiqizo njengemisebenzi, futhi uyazi ukuthi isipiliyoni siwukuphela kokhiye wesiteji.Kumkhuba ojwayelekile wokwenza ngokwezifiso indlu yonke, i-YALIS iphishekela ubunye besitayela sasekhaya.I-MULTIPLICITY, ivumela ngempela izibambo nezicabha ukuthi ziphelelisane.
Okwedlule: Umhlinzeki we-Minimalist Door Handle Supplier
Olandelayo: I-Interior Minimalist Design For Profile Doors
isibambo somnyango we-minimalist
minimalist umnyango isibambo brand
inkampani minimalist umnyango isibambo
Minimalist umnyango isibambo ifektri
umenzi wesibambo somnyango we-minimalist
minimalist umnyango isibambo umphakeli
Umhlinzeki we-Minimalist Door Handle Supplier